North America inbound Tourism inoshandiswa yakaderera ne74.1% muna 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » North America inbound Tourism inoshandiswa yakaderera ne74.1% muna 2020
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kufanotaura kuchamhembe kweAmerica kunotevera chibvumirano chevashanyi vepasirese chekuti kushanya kwemumba kunozotanga kutanga na2022, asi vanosvika kune dzimwe nyika havangadzokere kusvika muna 2024.
Vese vanosvika kune dzimwe nyika kudunhu vakaramba 67% gore-ne-gore muna 2020.
Mari inowanikwa mudunhu yakadzikira ne74.1%.
Kufungidzira kwemari yekushambadzira iri mukati inoratidza kuti haizopfuure pre-denda kusvika mushure megore ra2025.
Nzvimbo dzekuNorth America (USA, Mexico neCanada) dziri pamatanho akasiyana ekuvandudza kwekushanya. Zvisinei, chimwe chinhu chakajairika ndechekuti mhedzisiro ye COVID-19 denda muna 2020 yanga yakaoma kunzwikwa kune yega yega yekushanya hupfumi.
Ichangoburwa 'Yekushanya Ekushambadzira Musika Insight: North America (2021)' mushumo wakawana kuti vese vanosvika pasirese mudunhu vakaderera 67% gore-gore-gore (YoY) mu2020 uye inbound expenditure ne74.1%. Kufanirwa kwekufungidzirwa kweNorth America kunotevera chibvumirano chevashanyi venyika dzepasi rose chekuti kushanya kwemunyika kuchatanga (2022), asi vanosvika kune dzimwe nyika havangadzokere kusvika muna 2024.
COVID-19 ichiri kuzivikanwa sengozi huru mukukura mukati mechikamu chekufamba, uye kuNorth America izvi hazvina kusiyana.
Kurasikirwa kwekupinda kwevashanyi kushandisa mu2020 (-74.1%) kusvika USA, Mexico uye Kanadha yakanga yakakosha. Kufanotaura kwazvino kunoratidza kuti izvi hazvitarisirwe kupora zvizere mushure megore ra2025, uye ichi chichava chimwe chezvinhu zvikuru zvinokanganisa kugadzirisa hupfumi hwenzvimbo iyi mumakore mashoma anotevera.
Imwe yemabhenefiti akakosha ekushanya kuri mukati ndezvekushandisa, izvo zvinogona kuwedzera mari yezvehupfumi, kukurudzira basa uye kuita senzira yekusimudzira zvivakwa. Nzvimbo imwe neimwe yaunobata inobata yakasimba yekupa zvekushanya, asi izvi hazvigone kuvimbwa nazvo zvega kugadzirisa kupunzika kwekufamba kwenyika.
Kufamba kuenda kuNorth America kubva kune dzimwe nzvimbo pasirese kunogona kudhura. Ongororo ichangobva kuitwa yakawana kuti 23% yevakabvunzwa pasi rese vakaderedza mabhajeti avo epamba mugore rapfuura uye 27% vane zvimwe zvavakadzikisa. Kuderedzwa mabhajeti kunoreva kushomeka kwemari pane kutandara kunokanganisa kugona kufamba. Zvipingamupinyi zvebhajeti zvichave zvakakosha mukutenga zviitiko zvekufamba mukati memakore mashoma anotevera, izvo zvinogona kukanganisa njodzi yekushanya kweNorth America mukuenzanisa nedzimwe nzvimbo pasi rese.
Nekuda kwekuswedera padyo, kubatana uye kukwikwidza vashoma-mutengo vatakuri (LCC) vanoshanda, kufamba pakati peUS, Canada neMexico kunogona kunge kuchidhura, kuchikurudzira kufamba munzvimbo dzacho. Kufamba kwepamutemo kunokosha mukushanya kweNorth America. Kwese kwavanoenda kunovimba zvakanyanya nenzvimbo dzakavakidzana senzvimbo dzakakosha dzemari.
Kubva kunzvimbo dzakakura dzepanyama dzinosanganisira nzvimbo dziri mumahombekombe egungwa, mapaki emunyika uye nharaunda dzemakomo kusvika kumaguta ane chipatapata akazara netsika, North America inobatsirwa nechipo chakasimba chekushanya. Naizvozvo, kune hwakawanda hwakasiyana hwezvinhu zvekudhonza zvinokwezva vashanyi pasirese kuzorora uye bhizinesi. Mukuwedzera kune dzinoyevedza nzvimbo dzekushanyira, yayo yakakura VFR (kushanyira shamwari uye hama) musika zvakare yakasimba chinhu. Kubatana pakati pesangano rekushambadzira kwekuenda (maDMOs) nemitumbi yehurumende zvichakosha kuti uone kusununguka kwehupfumi kudunhu riri kuenda kumberi.